Budata AVG AntiVirus Free 2021 maka Windows
Budata AVG AntiVirus Free 2021
Budata AVG AntiVirus Free 2021,
AVG AntiVirus Free dị ebe a nwere nsụgharị ọhụrụ nke na-ewe obere ohere ma belata ojiji nchekwa ma e jiri ya tụnyere mbipute gara aga. Na ijikọta nkwupụta nke nyocha ngwa ngwa na arụmọrụ ka mma, sọftụwia ahụ na-abịa na mgbanwe dị mkpa na nhazi interface yana ụdị 2020.
Emepụtara mmemme ahụ iji mata sọftụwia antivirus adịgboroja. Karịsịa kwesịrị ekwesị maka ndị naanị sọfụ ịntanetị ma jiri ọrụ ịkparịta ụka nsocialntanet, AVG AntiVirus Free anọwo netiti ndị na-eduga antivirus ngwa na ụlọ ọrụ a ọtụtụ afọ. Ihe omume a, nke na-enye nchebe zuru oke ya na usoro ya a na-emelite kwa mgbe, nde mmadu bi gburugburu uwa na-eji ya. AVG AntiVirus Free na-ele anya maka egwu egwu ọhụụ na mmelite oge niile nke igwe ojii na-akwado na netwọkụ nchebe obodo.
Site na mmelite nchekwa data nje, AVG AntiVirus Free dị njikere mgbe niile maka egwu ndị kachasị ọhụrụ, na-enye nchebe dị elu. Sọftụwia a, nke na-enye gị ọkwa nchedo kachasị elu nefu na nhọrọ dị ka ihe nchebe etinyere, ihe mgbochi spyware megide spyware, nyocha e-mail, ihe mgbakwunye nchekwa, ịchọrọ ma ọ bụ nyocha akpaka. na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma na-enweghị nwayọ arụmọrụ kọmputa gị nụzọ ọ ga - esi rụọ ọrụ.
Olee otú Wụnye AVG Antivirus?
Anyị gbalịrị ịkọwa otu esi etinye AVG, otu nime mmemme antivirus kachasị nụwa, na kọmputa nwere vidiyo dị nokpuru.
AVG Antivirus Njirimara
Award-emeri nje mwepụ na mgbochi usoro
Nyocha ngwa ngwa ma mara ihe
Advanced nzuzo njikwa
Achọpụta ma kwụsị nje, iyi egwu na malware
Na-akwụsị njikọ ndị na-adịghị ize ndụ na faịlụ
Free mobile nchedo
Na-egbochi nnyocha na izu ohi data
Doo bụla Chọpụta nke gị ehichapụ faịlụ
Na-enyere aka na-gị faịlụ nzuzo mma
Na-enyere kọmputa aka ọsọ ọsọ
Ndụmọdụ na ịdọ aka na ntị dị mfe iji
Mgbanwe site na AVG Anti-virus Nwelite 20.10.3157
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na AVG Antivirus Free Mmelite 20.9.3152
Votu maka atụmatụ - Votu maka ọkacha mmasị gị njirimara njirimara ma ọ bụ nyefee echiche gị maka atụmatụ ọhụrụ. Gaa na NchNhr> Banyere ma gwa Avast mmasị gị (naanị maka ndị ọrụ adịchaghị)
Agbaba nkịtị na ndabere
Ugboro na akpaka melite
Nchedo netwọkụ mmekọrịta
Niile atụmatụ na pro version na-efu efu
AVG AntiVirus Free 2021 Ụdịdị
Mmepụta: AVG Technologies